मार्केटिंग मार्न मार्न रोक्नुहोस् | Martech Zone
जब एक बिद्यार्थीलाई स्कूलको खाजाको लागि पैसा चाहिन्छ, यो पैसा वा कहाँबाट आउँदैछ भनेर उनीहरूमा थोरै वा कुनै परिणाम हुँदैन। उनीहरू भर्खर भोका छन् र पैसा चाहिन्छ। यो केवल स्कूलको खाजा मात्र होईन, यो विद्यार्थी अनुदान र छात्रवृत्ति, मेडिकल सामान, शिक्षण, डेकेयर, र अन्य धेरै। आवश्यकताहरूको सूची असीमित छ र, एक डाउनडेड अर्थव्यवस्थामा, यो बढ्न जारी छ।
अनुयायीहरूका लागि चन्दा
जब हैतीमा भूकम्प गयो, इन्टरनेटले देशलाई चाहिने सम्पूर्ण आर्थिक र भौतिक आवश्यकताहरूको बारेमा चर्चा गरिरहेको थियो। त्यस समयमा मसँग व्यापार थिएन। म एक्लो बुबा हुँ र पैसा कहिल्यै प्रशस्त थिएन। तर यो घटनाले मेरो मुटुमा यत्तिकै जोड दियो मैले पैसा दान गर्ने प्रस्ताव गरेँ म ट्विटरमा अनुयायीहरूको निश्चित संख्यामा पुगेँ।
प्रतिक्रिया तुरुन्त थियो। मानिसहरूले मलाई चिच्याए कि म निर्दयी छु र यो मेरो लागि भयानक कुरा थियो। म बिल्कुल चकित भएँ ... म केवल ट्विटरमा आफ्नो अधिकार बढाउन खोजिरहेको थिए र यो एक योग्य कारण जस्तो देखिन्थ्यो। मैले पैसा लिन सक्थें र मेरो खाता प्रमोट गर्न कुनै पनि नम्बरमा विज्ञापनहरू खरीद गर्न सक्थें… तर यसको सट्टामा मैले सोध्यें यो उत्तम हुनेछ किनकि कोषहरू सबैभन्दा बढी चाहिनेहरूलाई जान्छन्।
मैले अन्ततः छोडिदिए। मसँग धेरै व्यक्तिहरूले मलाई पिटेका थिए कि म प्रस्ताव फिर्ता लिए (र जे होस्, दान गरे)।
यो रोक्नु पर्छ।
मैले भर्खर एउटा ठूलो कम्पनीको सीएमओसँग कुरा गरिरहेको थिएँ जसले मलाई भने कि उनीहरुलाई सामग्री प्रदान गर्न र उनीहरूको सामान र सेवाहरुको प्रबर्धन गर्न विद्यार्थीलाई अनुदान र छात्रवृत्ति प्रदान गर्न मन पराउँछन्। प्रतिक्रिया यो रणनीति को लागी उस्तै हो… धेरैले चिच्याए कि उसको बोसो बिरालो कम्पनीले बिद्यार्थीहरुको शोषण गरिरहेछ र तिनीहरूले अनुदान र छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु पर्छ, जे भए पनि।
त्यहाँ एक मात्र समस्या छ ... ऊ सक्दैन। अनुदान र छात्रवृत्ति को लागी कुनै बजेट छैन। ऊ केवल पैसा दिन सक्दैन जुन उसको बजेटले उसको लागि उत्तरदायी हुन र आम्दानी बढाउनको लागि आवश्यक छ। उसले पैसा लगानी गर्नुपर्दछ र कोषमा लगानीमा फर्काउनु पर्छ। अर्को शब्दहरुमा, उनीसँग मार्केटिंग बजेट छ र यसले कुनै पनि चीजको लागि प्रयोग गर्न सक्दछ - जब सम्म यसले व्यापार परिणाममा डोर्याउँदैन। ऊ चैरिटी चलाइरहेको छैन, ऊ एक व्यापार चलाउँदैछ।
धेरै कम्पनीहरूले दुबै गर्न मन पराउँछन्
यसको सट्टामा, उसले प्रति क्लिक, विज्ञापन, सामग्री र व्यवसायका साथ अन्य रणनीतिहरूको लागि भुक्तान गर्न जारी राख्छ जहाँ उसलाई सार्वजनिक रूपमा मल्टिन गरिने छैन। यो कुल घाटा हो। धेरै आलोचकहरू जसले उनको कम्पनीलाई राक्षसको रूपमा व्यवहार गर्छन् (र प्रायः कर्पोरेसनहरू राक्षसहरू जस्तो व्यवहार गर्छन्) मार्केट मार्केटिंग मार्दैछन्। पैसा त्यसपछि अरू ठूला कम्पनीहरूमा जान्छ जहाँ मद्दत गर्नु आवश्यक पर्दछ।
कम्पनीहरूले नाफा कमाउन व्यवसायमा छन्, तर यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूलाई कम भाग्यशाली, वा वातावरण, वा खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्ने अवसरहरू खोज्नु हुँदैन। मार्केटिंग मार्न रोक्नुहोस् र मान्यता दिनुहोस् कि अरबौं डलरहरू छन् जसलाई अधिक आवश्यक परेकाहरूलाई मद्दत गर्न खर्च गर्न सकिन्छ - तर कम्पनीले मात्र लगानी गर्न सक्दछ यदि उनीहरूले त्यो लगानीमा फिर्ती भएको महसुस गरे भने।
मार्केटि killing मार्केटिंग मार्न रोक्नुहोस्।
यहाँ केहि महान उदाहरणहरु छन् मार्केटिंग कारण
उत्तम क्लिपहरू संग काम AdoptAClassroom.org योग्य शिक्षकहरू फेला पार्न र उनीहरूको सपनाहरूको कक्षाकोठामा उनीहरूलाई चकित पार्न। यो भिडियो, महान क्लिपको एकीकृतको अंश विपणन अभियानको कारण, - सामाजिक, डिजिटल, इन-स्टोर, इन-होम, टिभी, रेडियो र प्रिन्टको संयोजन गर्ने कम्पनीको इतिहासमा पहिलो हो।
टैग: एउटा कक्षा कोठा अपनाउनुहोस्विपणन कारणअनुदानउत्कृष्ट क्लिपहरूमार्केटिङउद्देश्यउद्देश्य संचालित मार्केटिंगउद्देश्य संचालितछात्रवृत्ति
डाइनर क्लब साक्षात्कार: एक सामाजिक ब्रान्ड निर्माण गर्दै
अप्रिल 8, 2013 मा 4: 37 PM
“मेरो मतलब यदि हामीसँग केवल एक व्हीलबरो छ भने। त्यो केहि हुनेछ। ” - वेस्टली, AKA ड्रेड समुद्री डाकू रबर्ट्स।
आवश्यक परेकोलाई بت गर्दै छ कि तपाइँले मद्दत गर्नुहुन्छ तर पहिले तपाईको मद्दत लिनु पर्दैन। यो परोपकार होइन। यो दान होइन। यो दिदैँन यो शोषण हो। यो लाभदायक छ। यो क्लासिक घोडा व्यापार हो।
त्यो सत्य प्रेम होइन। त्यो *** प्रत्येक दिन हुन्छ।
कारण दान गर्नुहोस्। तपाईंको ट्याक्स राइडअफ फारमहरू पाउनुहोस्। तपाईंको प्रेस विज्ञप्ति बयान लेख्नुहोस्। उनीहरूको PR टोलीसँग काम गर्नुहोस् निश्चित गर्नका लागि तपाईंले वचन प्राप्त गर्नुभयो। यो सहि गर्नुहोस्।
तर प्राय: जसो उनीहरूलाई चाहिन्छ। यो गर्नुहोस् किनकि तपाईको मुटु चाहिन्छ। स्वार्थी लाभको लागि यो नगर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई भोको र पीडित र रुवाउने र चोट पुर्‍याउने, भुखमरी र डिहाइड्रेटिंगबाट पीडामा दिक्क लाग्ने, पखाला-भिगोने, पेच-लाइनदार खाडलहरू र एउटै कपडाहरूमा बाढी पोखरीमा घुम्नेहरूका लागि 'कारक प्रयास' मा प्रत्यक्ष ROI आवश्यक छ भने। weeks हप्ताको लागि, उनीहरूको राम्रो फैसलाको बिरूद्ध प्रार्थना गर्दै कि उनीहरूले रातभर यसलाई लुट्ने, दot्गा र नरभक्षीको बीचमा बनाउँदछन्, त्यसो भए तपाईं यो सहन सक्नुहुन्न।
ठूला कम्पनीका मुख्य कार्यकारी अधिकारीहरूसँग यो पहिले नै उनीहरूको बजेटमा राखिएको छ। तपाईंको "ठूलो कम्पनीको सीएमओ" या त तपाईंलाई झूट बोल्दै छ वा डमबास हो। उसलाई थप्पड मारियो र भोट हाल्नु पर्छ। वा उसले पीडितहरूसँग रात बिताउनु पर्छ। यो एक परिवर्तन हुनेछ। नरक, हामी यस्तो अवसरहरु को लागि LM मा एक बरसातको मजा थियो। हामीले समुदायलाई सहयोग पुर्‍याउन काम पछि समय लिनको लागि हाम्रा उपकरणहरू र प्रतिभाहरू पनि प्रयोग गर्‍यौं। अवसर उद्यम हाम्रो मनपर्ने थियो।
पोष्ट लेख्नुहोस्। एक प्रार्थना पठाउनुहोस्। केही जेब परिवर्तन दिनुहोस्। तर तपाईं कहिले वेब उपस्थिती बजार शेयर र अरूको दुर्भाग्य र piggybacking द्वारा केही ग्राहकहरु लिन को लागी प्रयास नगर्नुहोस्।
तपाईं समुद्री डाकू हुनुहुन्न। तपाईं कालो बजार व्यापारी हुनुहुन्न। तपाईं मेरो नायक हुनुहुन्छ। तपाईं मेरो सल्लाहकार हुनुहुन्छ। तपाईंको मुटु सहि छ। मलाई थाहा छ तर यी मेरो डेनम यू दिनहरूमा मेरा सबैभन्दा ठूलो झगड़ेहरू मध्ये एक थिए: उपहार दिईएकोमा बनाम बनाउनु। यसैले सीआरएम उद्योग केहि बर्षमा नियमित हुन जानेछ।
तपाईलाई त्यो सबै छोटो अवधिको, घोडा ट्रेडि sh sh * t आवश्यक पर्दैन। तपाईंसँग उद्योगमा एक उत्तम आवाजहरू छन्। तपाइँको मेरो ध्यान छ, र यसले प्राप्त गर्न धेरै लिन्छ। म तपाइँका साथीहरूको धेरैजसो बयानहरू पढेर सुत्दछु। तपाईसँग साहस हुनु पर्छ उस्को माथि माथि 20 मा ती माथि हुन को लागी र तपाईं हिंड्न हुनेछ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण, तपाईं परिवर्तन गर्न उपस्थिति छ। तपाईका उपहारहरू प्रयोग गर्नुहोस्, गिमिक्स होइन। डीएम न्यू मिडिया लामो समय मा बेहतर राम्रो हुनेछ।
र विश्व एक राम्रो स्थान हुनेछ।
- जीवन को लागी Bromance
अप्रिल 9, 2013 मा 9: 10 एएम
ठीक छ, @natfinn: disqus - यो हास्यास्पद प्रतिक्रिया हो र मलाई जवाफ दिन वास्तवमै लायक छैन। तपाईंले कुराकानीमा मेरो राम्रो साथीको पनि अपमान गर्नुभयो। तपाईंको व्यवसायको धारणा त्यति बेवास्ताको छैन जति यो मूर्ख छ। मैले धेरै कम्पनीहरूमा काम गरें र मिलियन डलर बजेट पाएको छु - र मार्केटिंगमा परोपकारी संस्थालाई चन्दा दिन कहिले पनि बजेट हुँदैन, न त मैले कम्पनीले काम गरेको कुनै “दान फिर्ता” प्राप्त गर्न सक्छ जुन उनीहरूले नाप्न सक्छन्। तर हामीसँग मार्केटिंगका लागि पैसा छ। यहाँ कुरा भनेको त्यो पैसालाई परोपकारमा लगानी गर्नको लागि नभई अर्कै व्यवसायको रूपमा चलाउनु पक्कै सक्षम छ। तपाईंको दृष्टिकोण ठ्याक्कै समस्या हो जुन मैले निन्दा गरिरहेको छु - यो अतार्किक छ। तपाईको भन्दा पनी एउटा दान पनि प्राप्त भयो।
अप्रिल 22, 2013 मा 5: 23 PM
यदि तपाईंले उनीहरूलाई बेवास्ता गर्नेहरूको कुरा सुन्नुहुन्न र तपाईंले मेरो कुरा सुन्नुहुन्न भने, बोस्टन म्याराथन बमवर्षकको सिकार भएकाहरूलाई $ don०० दिने दान दिनुहोस् र हरेक चोटि 'घूस' भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने बित्तिकै मलाई गुम्बेलहेड किन्नुहोस्। किनभने त्यो भनेको उनीहरूलाई सार्वजनिक प्रदर्शनलाई सद्गुण वा नगदीको बदलामा समर्थनलाई।
परोपकारहरू मात्र केहि पनि प्राप्त हुँदैन जब तपाईं यस्तो दृष्टिकोण प्रयास गर्नुहुन्छ, प्राय: सबैले यसलाई लिदैन। किन? उनीहरू जान्दछन् कि यसले दाताहरूको ठूलो फ्लगेट खोल्छ जुन नगदको बदलामा पक्षधरहरूले आशा गरेका थिए। तिनीहरूले अन्ततः दाताहरूसँग उनीहरूको कारण भन्दा बढी समय खर्चमा बिताउँछन्। यसले उनीहरूलाई लाभ पुर्‍याउँछ र गहिरो, गाढा पक्षधरहरूको लागि मार्ग सहज पार्दछ जुन भ्रष्टाचारको कोटीमा पर्दछ। चिप्लो ढलान यसैले त्यहाँ कानूनहरू छन्।
नमस्ते, म नाट फिन हुँ। धर्ममा बीए, व्यवसाय मा बीएस। सोली, सामसु,, सेली, ट्रम्प युनिभर्सिटी, टेली ब्रान्ड्स - 'टिभीमा देखा परेको,' रस ह्विटनी (जसका ग्राहकहरूले रोबर्ट किओसकीको "रिच ड्याड, गरीब ड्याड।") को आरम्भकर्ता एजेन्सी - सोनी, सामसु,, सियोल, ट्रम्प युनिभर्सिटी, टेलब्रेन्ड्स - को करोडपति एजेन्सी ग्राहकहरू छन्। , सबै तारा उत्पादनहरू, (जसका उत्पादहरू "Snuggie" समावेश गर्दछ), कमसेकम मुनाफाका कारणहरूलाई दान दिन थाहा थियो। तिनीहरूले यसको लागि योजना बनाए। दुःखको कुरा, किनभने सम्भवतः कारण मार्केटिंगको आर्थिक उल्टो थाहा थियो। उनीहरूले प्रभाव जान्दछन् र फ्रिक्वेन्सी जान्दछन् जुन घटनामा आउँछ। म जवाफ दिन कुर्दै यो हो। म दु: खी छु घटना को दुखद थियो।
कृपया कारण मार्केटिंगमा तपाईंको अडानमाथि पुनर्विचार गर्नुहोस्। तपाईं अति उत्तम हुनुहुन्छ। तपाइँ साथीहरु को लागी रोजगार पाउनुहुन्छ। तपाईं खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई आफ्नो घरहरू खोल्नुहुन्छ। तपाईं dimes अतिरिक्त। तपाईं र तपाईंको राम्रो सीएमओ मित्रले अधिक धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। यति धेरै।
अप्रिल 22, 2013 मा 5: 28 PM
ठीक छ, म फेरि यो प्रयास गर्न जाँदैछु। हामीसँग एक चैरिटी बुज छैन। हामीसँग एक मार्केटिंग बजट छ। या त हामी हाम्रो मार्केटिंग बुडट संग लगानीमा फिर्ताको पाउँदछौं वा हामी व्यापार बाट बाहिर जान्छौं।
त्यसो भए तपाईले परोपकारीलाई केही पनि दिनुहुन्न। म बुझ्दछु। र होईन, म आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्दिन। बरू म चाहिएको भन्दा कम व्यावाहारहरूको साथ काम र नाफा देख्दछु।
अप्रिल 22, 2013 मा 5: 31 PM
जस्तो म चाहन्छु। मैले भर्खरै देखेको छु पर्याप्त व्यक्तिहरू यस अवस्थामा रिंगरको माध्यमबाट जान्छन्।
दान संग एक सानो PR को बारेमा के छ?
र एक बियर।
अप्रिल 22, 2013 मा 5: 32 PM
वा जोम्बो डस्ट बिल पाइन्छ सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्!
अप्रिल 9, 2013 मा 7: 30 एएम
मलाई यहाँ कोष जुटाउनेमा वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य मनपर्दछ र किन यसो…
मेरो बच्चाको स्कूलमा "आटाका लागि भोजन" हरेक केही हप्ता बाहिर जान्छ। आधार सरल छ, त्यस्ता र त्यस्ता रेस्टुरेन्टहरूमा खान जानुहोस् र त्यो रेस्टुरेन्टले त्यस साँझको लागि स्कूलको सबै बिक्रीको १०% दिन्छ। डगको परिप्रेक्ष्यमा, यो रेष्टुरेन्ट विज्ञापनको रूपमा मिल्दोजुल्दो छ "आउनुहोस् हामीसँग त्यस्तै राती खाऊ र हामी तपाइँको स्थानीय स्कूललाई ​​हाम्रो बिक्रीको १०% दिन्छौं"। दिनको अन्त्यमा, स्कूलले १०% पाउँदछ कि कसले अनुरोध गर्दछ।
यहाँ भिन्नता भनेको कसरी मानिसहरूले प्रस्ताव बुझ्छन् भन्नेमा छ। जब स्कूलले हाम्रो पैसाको लागि सोध्छ, हामी भन्छौं "हामी हाम्रो स्कूललाई ​​माया गर्छौं त्यसैले हामी उनीहरूलाई सहयोग गरौं"। जब कुनै व्यवसायले यसको लागि सोध्दछ, हामी भन्छौं "त्यो व्यवसायले मेरो बच्चाको स्कूल प्रयोग गरेर मेरो बिक्री बढाउन खोजिरहेको छ"। अन्ततः यद्यपि, अन्तिम परिणाम उस्तै हो।
म स्वीकार गर्दछु, जब सम्म यो लेख पढ्ने र अन्य परिप्रेक्ष्य नबुझेसम्म म पनि रोएको छु। एक कदम पछि, कलेज विद्यार्थी मा एक लोगो संग एक ब्याकप्याक वा अन्य गियर प्रयोग के फरक छ? मेरो अनुमान छ कि तिनीहरूको गियरमा पहिले नै लोगो छ र तिनीहरूले यसको लागि कुनै पैसा पाउँदैनन्।
अप्रिल 9, 2013 मा 9: 04 एएम
त्यो साँच्चिकै महान अन्तरदृष्टि हो @ google-607b0d9455bf19307cf8bf2968785187: डिस्क - तपाइँ बिल्कुल ठीक हुनुहुन्छ, कार्य उही हो तर परिप्रेक्ष्य धेरै फरक छ। पोइन्ट 'शोषण' गर्ने होइन, यो मार्केटिंग डलर लगानी गर्नका लागि हो जहाँ यसले लगानीमा फिर्ती पाउन सक्छ। वर्षौंको बखत व्यापारप्रति हाम्रो दृष्टिकोण कत्तिको नकारात्मक भयो भन्ने कुरा रोचक छ। यो एक ठूलो कुरा छ कि क्यारिटीमा लगानी गर्न व्यवसायहरु। चन्दा उत्कृष्ट हो, तर चन्दा प्रायः लगानीमा फिर्ता हुँदैन। त्यसोभए ... जबसम्म म पैसाको अभावमा धनी हुँ, म पैसा फिर्ता लिनु पर्छ जहाँ यसको फिर्ती हुन्छ।